Kooxaha Juventus oo aan weli ka quusan saxiixa Paul Pogba, balse waxa ay tartan adag kala kulmayaan Real Madrid – Gool FM
(Manchester) 10 Abriil 2019. Kooxaha Juventus iyo Real Madrid ayaa la soo warinayaa inay bartilamaameed ka dhigteen oo ay ku dagaalamayaan saxiixa laacibka Manchester United ee Paul Pogba.
Bianconeri ayaa laacibkan ka gudbisay saddex dalab xagaagii la soo dhaafay, laakiin weli kama aysan quusan helitaankiisa, waxaana ay kula dagaalamaysaa Los Blancos.
Sida uu warinayso warsidaha CalcioMercato, Juventus ayaa diiday inay ka niyad-jabto inay la soo saxiixato xagaagan laacibka khadka dhexe Kooxda Manchester United ee Paul Pogba.
Kooxda xafidanaysa horyaalka Serie A ayaa saddex dalab oo ay ka gudbisay laacibkan laga diiday xagaagii hore, laakiin weli waxa ay rumeysan yihiin inay xiddiga xulka qaranka Faransiiska dib ugu soo celin karaan Magaalada Turin.
Waxa ay sidoo kale wajahayaan tartan ay kala kulmayaan kooxda Real Madrid oo dhankeeda doonaysa saxiixa xiddigan, maadaama macallinka Los Blancos ee Zinedine Zidane uu rabo inuu ciyaaryahankan u kacayso garoonka Santiago Bernabeu.
Dhinaca kale Manchester United ayaa doonaysa inay ku fara-adaygto oo ay ku dadaasho sidii ay ku sii haysan lahayd laacibkeeda ay lacagaha badan kala soo baxday ee Pogba.
Eden Hazard oo diidi doona inuu heshiiska u kordhiyo kooxdiisa Chelsea xitaa haddii ay u ogolaan waayaan inuu u dhaqaaqo Real Madrid!